Waraanni mootummaa kallattii afuriin magaalaa Wukroo meeshaa gurguddaan haleeluu itti fufe. | Kichuu
#BRAEKING NEWS #Wuqroo
Waraanni mootummaa kallattii afuriin magaalaa Wukroo meeshaa gurguddaan haleeluu itti fufe. Haleellaan kun kaleessa kan jalqabe yoo ta’u har’a garuu ittuu hammaate jedhameera. Namoonni nagaan baayyeenis kan keessa miidhaman ta’uu gabafamaa jira. Karaa biraatiin waraanni lafoo garee mootummaa fuulduratti deemuu hin dandeenye jedhameera. Milishaa fi Uummanni Tigraay kumaatama hedduun lola ulfaataa geggeessaa akka jiranis himame.
Wuqroon bakka kaampiin waraanaa Izzii Kaabaa guddaan ture keessaa tokkoo dha.
“Operation 72” Fashala’ee Jira!
Guyyaa 3 dabalataa gareen mootummaa ofiin jettu hooggantoota Naannoo Tigiraayiif kennite Tigraay waan tuffatteef duulli “Operation 72” jedhamu kallattiin koloneel Abiyyi Ahimad fi Isaayyaas Afawarqiin geggeeffame fashalaa’e.
Duulli kun guyyaa kaleessaa ganama irraa jalqabee geggeeffamaa oole. Galmi duula kanaa kallattii afuriin Maqalee 30km- 40KM irratti marsuudhaan Kamisa har’aa koloneel Abiyyiin ergaa akeekkachiisaa ummata Maqaleef karaa TV dabarsuu ture.
Akka karoora “Operation 72” kanaatti:
1. Idaga Hamuz irraa Magaala Negash ykn Wukroo qabachuu
2. Hawuzeen irraa Abrah Atsba qabchuu
3. Kallattii Aksum irraa kibbatti Abiy Addi qabachuu fi
4. Karaa Kibbaan Waajiraat -Hiwaanee qabachuun raadiyeesii 30km-40km irratti Maqalee marsuu ture.
Tahus, haleellaa ittisaa fi lola ummataa waraanni Tigraay kaleessa geggeesseen guutummaa guutuutti karoorri kun fashalaa’uu isaa maddeen keenya waraanaa irraa mirkaneessineerra.
Waan itti aanu walumaan ilaalla. Odeeffannoo wayiitawaa fi qabatamaa argachuuf fuula Facebook keenyaa hordofaa! FSM irraa
Waraanni Tigraay ammas addoota waraanaa lamatti injifachuu isaa ibsaa jira. Adda Waraanaa Hawuzeen guutummaa guutuutti waraana weerartuu Nafxanyaa fi Shaabiyaa irraa bilisa baaseera jedha. Idaga Hamus irratti loltoota mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaafi loltoota Shaabiyaa kumaatamaan lakkaa’aman booji’uu isaa fi guutumatti barbadeessuu isaa himameera. Lolli kun ega gareen mootummaa Guyyaa kaleessaa galgala marsaa xumuraaf haleellaa Maqalee irratti labsanii booda Kan tahee dha.
Gareen mootummaa haleellaa geggeessaa jiru babal’isuuf karoorsee jira.halumaa kanaan Warshaa Simintoo Masiiboo, Gadaamiwwan qarqara magaalattii jiran, Hoteelota dhuunfaa fi gamoowwan rukutuuf qophiirra jiraachuu ibsa ofiifuu baase irraa hubachuun ni dandaa’ama.
Badhaafamaan Noobelii Addunyaa Iskiriinii ykn fooddaa TV mootummaa irratti qawwee, taankii fi jeettii waraanaa fannifatee dhaabbilee hawaasaa rukutuuf dhaadataa jira. Kun seenaa addunyaa kana keessatti kan jalqabaas kan xumuraas taha!
Godina Harargee Lixaa Magaalaa Bordoddeetti Hiriirri Mormii Qarree fi Hawwan qofa hirmaachise bahame.